KARDEMİR na -ewupụta Qualitylọ ọrụ dị elu maka ụlọ ọrụ Automotive na Defense | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region78 KarabukKARDEMİR na-emepụta Ngw’ọrụ dị elu maka Industrylọ ọrụ Automotive na Defense
24 / 09 / 2019 78 Karabuk, Central Anatolia Region, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Turkey
kardemir na-agbakwunye uru na Pọtụfoliyo ngwaahịa ya dị elu
Karabük Iron na Steel Work Inc. (KARDEMİR) rụpụtara ihe dị mma nke igwe 4140 (42CrMo4) nke ejiri rụọ ọrụ na nchekwa na nchekwa.
KARDEMİR mepụtara otu ndị ọrụ na-arụ ọrụ iji mepụta àgwà nchara maka ụlọ ọrụ ụgbọ ala na ịgbachitere ma mee ka nyocha na mmepe ya na Ngalaba R & D. Companylọ ọrụ anyị, nke na-arụpụta njiri mara mma nke 4140 (42CrMo4) nke ejiri rụọ ọrụ na ngalaba na-eguzogide dị iche iche na-emepụta site na ngalaba ụlọ ọrụ na-agbachitere na nchekwa na mpaghara na-emepụta ngwa agha, mezuru azụmaahịa mbu nke ngwaahịa ọhụrụ a.
N’inwe akụrụngwa na-agbanwe agbanwe nke ukwuu, a na-ekwupụta na ha nwere ikike imepụta agwa nchara dị iche iche na nnukwu uru dị na Çubuk Kangal Rolling Mill. Hüseyin Soykan kwuru na ebumnuche ebumnuche dị na 4140 (42CrMo4) nke mepụtara n'ụdị eriri igwe ma nye ya n’ahịa azụmaahịa bụ igbochi mbubata mbubata.
N’ikwu na 4140 (42CrMo4) rụpụtara arụpụta ihe eji arụ ọrụ bụ akụkụ nke Board Board nke Ndị isi ọnụ ahịa na-atụpụta, mgbanwe ngwaahịa, mbupu mbu na atụmatụ na-ebute uto, Soykan kwuru na ebumnuche ya kacha mkpa bụ itinye aka na mmemme ntanetị na ngalaba nchekwa na mpaghara. Turkey mmepụta nke ọhụrụ ngwaahịa na a ole na ole nke Turkish ụlọ ọrụ na-anọchite anya ndị ọzọ ụdị obi ụtọ nke na-enwe nyere ọrụ anyị ụlọ ọrụ CEO Dr. Hüseyin Soykan “Nke mbụ, ana m ekele ndị ọrụ ibe m. Ọ dị m ka ya bụrụ na ngwaahịa ọhụrụ anyị ga-aba uru. N'otu aka, anyị na-anwa ime ka usoro mmezi anyị dị ọhụrụ ma bulie ọrụ injinịa na ike mmemme ka anyị na-amụ mkpa na atụmanya nke ụlọ ọrụ niile nke ọha na nke onwe. Site na mbọ ndị a, anyị ewebatala ọtụtụ ngwaahịa ngwaahịa igwe anaghị agba ọhụụ na-abawanye uru n'ahịa a. N'ime usoro a, anyị ga-aga n'ihu na-ekepụta ndị ahịa na uru maka ị na-abawanye onyinye dị mma maka azụmaahịa mba ofesi. "
KARDEMİR Na-ebu Ụzọ Mbụ Obodo na National Railway Wheel
Turkey si Kardemir emewo a oké eriri igwe
Kardemir, maka Ngwaọrụ Maka Nchekwa Mmepụta…
Ahịa ahia ahia ahia gara KARDEMİR
Türkoğlu logistics Center emepe Faaliyet
Industrylọ ọrụ Turkey 5 -10 Nde Euro ka Mbupụ…
Ndị na-ahụ maka gburugburu ebe obibi na gburugburu ebe obibi na-eme ka njem dị mma
Ulo oru ihu ahia na gburugburu ebe obibi na Kocaeli
ụlọ ọrụ nche